El Rosario Discover Discover Discover Online El El️
Njengoko sisazi, irosari Ngumthandazo oqhelekileyo nowesiqhelo kumazwe awahlukeneyo, umthandazo okhethekileyo nowahlukileyo owenziwa yiCawa yamaKatolika ukuze ubenakho ukukhumbula nokukhumbula nganye yeemfihlakalo iNtombi enguMariya noYesu Kristu ekwakufuneka beyidlulisile bayinike. usindiso., Uxolo neNkululeko.
1 Irosari yemveli
2 Intsingiselo kunye nomsebenzi weCrucifix
2.2 Zeziphi izinto ezenziwe ngumnqamlezo?
2.2.1 Intsingiselo yesigama INRI
3 Iyintoni imithandazo yeRosari?
4 Uthini umyalelo weRosari eNgcwele?
4.1 Ngaba kunyanzelekile ukuba iphinde imithandazo emva kweMfihlakalo nganye?
Umthandazo weRosari ubaluleke kakhulu kuwo onke amaKatolika, iiVangeli, phakathi kwabanye. Ukongeza, lo mthandazo ngokwahlukileyo kufuneka wenziwe ngentsimbi yesi-3 emva kwemini njengoko ibisenziwa kule minyaka idlulileyo. Nangona sibona ukuba lo mthandazo unzima ngokwesixa seMfihlakalo, izitishi kunye neeakhawunti ekufuneka zenziwe, ukuba nesikhokelo esihle uyakubona ukuba kulula kakhulu kwaye kuyenzeka.
Eyona nto iphambili ekuthandazeni iRosari kukuba xa sichaza iimfihlakalo zazo ezahlukeneyo, nokuba ziyavuya, zilusizi, zikhanyisile kwaye / okanye zizukile, sikhumbula ubomi beNkosi yethu uYesu Krestu kunye nomama wethu iNtombikazi enguMariya, kuba enkosi kubo , kuyo yonke into abayinikileyo kwaye ngenxa yokholo lwabo olukhulu kunye nokuthembela kwabo kuThixo, basihlangule kwizinto ezininzi ezimbi, basinika ithuba lokutshintsha umhlaba ngokulandela umzekelo kunye namanyathelo abo.
Kwakhona, ukusibonisa ukuba uxolelo nenceba zikhona, kodwa ngaphandle koku, ukuba kukho uThixo osithandayo kwaye ongasoze asishiye sedwa okanye singenakuzinceda; Ukhuseleko lwethu, isikhokelo, intuthuzelo nosindiso lwethu. Masilandele amanyathelo akhe size siguqe phambi kwakhe, ekuphela kwakhe onokumelana nemimoya namaza.
Intsingiselo kunye nomsebenzi weCrucifix
Umnqamlezo yinto esetyenziswa amaxesha amaninzi njengengubo okanye uphawu lokhuselo, olufanekisela uYesu Krestu emnqamlezweni, xa wanikela ngayo yonke into wanikela ngobomi bakhe ngenxa yethu. Umfuziselo womnqamlezo othethiweyo ubonakalisa esinye seziqendu esinokuthi siziqonde kwiimfihlakalo eziLusizi, kuba kukubethelelwa emnqamlezweni kunye ukufa yeNkosi yethu uYesu, osikhumbuza ukuba uvukile kwabafileyo kwaye nangona singenakumbona, uhlala ecaleni kwethu, esikhokelela kwindlela elungileyo kwaye esikhathalele.
Umsebenzi ophambili onawo umnqamlezo ekufezekisweni kweRosari kukuba iyasinceda ukuba sisikhokele senze lo mthandazo ngokuchanekileyo, ukongeza kuloo mbulelo kwiiakhawunti zayo ezinkulu nezincinci, siyazi isixa seMfihlakalo kunye nemithandazo eyimfuneko .
Zeziphi izinto ezenziwe ngumnqamlezo?
Iminqamlezo nganye ekhoyo iyahluka kwizinto ezenziwe ngazo, kuba ezinye zinokwenziwa nge-ceramic, ngentsimbi, ngomthi, ngeplastiki okanye ngobunzima obuguquguqukayo; Nangona zenziwe ngezinto ezahlukeneyo, oku akunantsingiselo ingako, kuba kuya kuxhomekeka kumntu oyenzileyo, nakwizinto umntu azithandayo.
Nangona kunjalo, bahlala benento enye, kuba bonke banomnqamlezo kwaye uYesu Krestu phezu kwawo; imele indawo yakhe yokubethelelwa emnqamlezweni. Kwakhona kwinxalenye ephezulu yalo mnqamlezo, inezokuqala zokuqala "INRI". Ke, ukuba ufuna ukwazi intsingiselo yazo, ungaphoswa licandelo elilandelayo.
Intsingiselo yesigama INRI
Njengoko bekwazile ukuqonda, yonke iminqamlezo inohlobo lokubhala ngaphezulu komnqamlezo othethiweyo, ukongeza, sinokubona iziqalo ezifanayo kwizibingelelo, iicawa, phakathi kwabanye. Igama elithi INRI linentsingiselo yesiLatini, eyi «Iesus Nazarenus Rex Ivdaeorum », xa liguqulelwe lithetha "UYesu waseNazarete, Kumkani wamaYuda". Ngeli xesha, eli binzana laliqhele ukubonwa njengelikhubekisayo kuYesu, kodwa ngaphandle kokuyiqonda, yayiyinyani kwaye iyinyani ukuba uYesu Kristu ngukumkani wethu, ukumkani wehlabathi lonke.
Iyintoni imithandazo yeRosari?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeerosari, kodwa nganye yazo ibonakaliswa ngokusetyenziswa kwale mithandazo ilandelayo:
Umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima.
Umthandazo wasimahla kunye nowobuqu.
Uthini umyalelo weRosari eNgcwele?
Ukuba ufuna ukuthandaza Ingcwele yeRosari, Kuya kufuneka uqale ngePhawu loMnqamlezo oyiNgcwele, emva koko uqhubeke umthandazo wokholo yaBapostile; Ngokulandelanayo kuya kufuneka uthandaze kuBawo wethu, ezintathu (3) Zukisa uMariya, uGloria kwaye ukusuka apho ushiye ukubhengezwa kweeMfihlelo eziVuyisayo, ezi mfihlakalo zimele ukuzalwa kunye nobuntwana bukaYesu. Kubaluleke kakhulu ukuba wazi amanyathelo afanelekileyo alo mthandazo, kunye nentsingiselo yawo kunye nokumelwa kwawo. Ngekhonkco elingezantsi, fumana izivakalisi ezitsha, ezinje nge Umthandazo womntu ogula kakhulu.
Xa ufikelela esiphelweni ngale mfihlakalo ikhankanywe ngasentla, kufuneka uphinde uyithabathe le mithandazo kwaye ke ngoku uqhubeke neeMfihlakalo eziLusizi; ezimele ukubandezeleka kweNtombikazi enguMariya noYesu, ezinje ngamatyala, ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kwabo. Emva koko, yenza imithandazo kwakhona kwaye uqale nge Iimfihlakalo eziqaqambileyo, ezingxelo zemimangaliso eyenziwayo yiNkosi yethu.
Thatha imithandazo esele ikhankanyiwe kwaye uqalise ngemfihlelo yokugqibela, iimfihlakalo eziZukileyo. Iimfihlakalo eziZukileyo zimela ukuzalwa kwakhona kwaye xa uYesu wavuswa. Landela ngokuvalwa kunye nemithandazo, kwaye ugqibile. Uya kuthandaza iRosari eNgcwele ngokuchanekileyo.
Ngaba kunyanzelekile ukuba iphinde imithandazo emva kweMfihlakalo nganye?
Oku kuchanekile ngokupheleleyo, kuba ngaphandle kwebali lale mfihlakalo, le mithandazo iphethe ukunika intsingiselo, ucwangco kunye nokusebenza kwiRosari eNgcwele.
Kubalulekile kwaye kunyanzelekile ukuba uqale ngemithandazo, uqhubeke ufunda rhoqo ekupheleni kweMfihlakalo nganye kunye nezikhululo zabo, ukongeza, ukuba uvale umthandazo kunye nabo. Nangona, ekugqibeleni ungabandakanya umthandazo wasimahla, ovela kuwe kwaye ungowakho, kuba ngalo mzuzu ungathandaza ucele isizathu esithile, nokuba yeyiphi na intswelo onayo, yosapho okanye abahlobo. abagulayo, kwabona basweleyo okanye kwimeko enjalo, ye el mundo iphelele, ukuze ujikeleze bonke abantu.